Nhau - Infinitus Plaza
Guangzhou Infinitus Plaza iri muBaiyun New Town, Baiyun District, Guangzhou City, Guangdong Province. Yakagadzirwa nemunyanzvi wepasirose uye ane mukurumbira wepasirese, uyo anozivikanwa sa "Mambokadzi wemakombama" - Zaha Hadid.
Infinitus Plaza inobatanidza nzvimbo mbiri idzi muchimiro chezviteedzana zve "zvisingagumi zvindori", se "∞", inotenderedza iyo yepakati bindu kuti igadzire yakavhurika yekutaurirana nzvimbo uye inounza mijenya yechisikigo mwenje mukati memukati, izvo zvakanaka kune zvakatipoteredza, simba-kuchengetedza uye padhuze nemasikirwo.
Ese aruminiyamu keteni rusvingo mapaneru eInfinitus Plaza anopihwa nekambani yedu --- Yingjiwei zvekuvakisa fekitori. Iyo aluminium alloy yeiyo plaza inonyanya kuve 3003 H24 uye 5083. Kuti gurantee iyo ipaneru mhando, ukobvu hwemberi kunokumbirwa kushandisa 4.0mm uye 5.0mm aluminium yemhando yepamusoro ndiro. Surface kurapwa kwePVDF multicolor kupfeka kune ese mapaneru inodzivirira iyo kubva kune acid mvura, inotonhora uye inopisa mamiriro ekunze, uye chengetedza zvigadzirwa zvinogadzikana uye zvinogara zvakanaka.
Iyo novel, yekugadzira dhizaini uye yakasimba yemhando yekudzora mwero inowedzera kuoma kwekugadzirisa iwo aruminiyamu mapaneru, asi vanga vachiomerera kune isingamboregi mafungiro, kutsvagisa uye kushanda nesimba uchienderera, isu pakupedzisira tinogadzirisa iwo matambudziko rimwe nerimwe. Kuratidza kugona kwedu kwekugadzira, kusimbisa mhando uye kutendeka kumutengi, isu tinotopatsanura imwe nyowani yekugadzira tambo yeiyi purojekiti. Basa revatengi rakasarudzika, yakazvimirira yekugadzira tambo, inokurumidza kupindura timu dhizaini, kugadzira uye padanho rekuisa saiti, ese ayo anorumbidzwa zvikuru uye anozivikanwa nechikwata cheZaha Design Institute uye mutengi.
Guangzhou Infinitus Plaza chirongwa chave kuda kupera, chingave chiratidzo chitsva cheGuangzhou uye chimwe chezvirongwa zvakatanhamara munyika.
Kana iri fekitori yedu, takagadzirira iro dambudziko nyowani kune chero chirongwa, kunetsekana kwaisazotirova, asi kutibatsira kuti tisimbe uye tisimbise simba. Iko kune iko kuda, kune Yingjiwei.